⭐️Indawo kaNicla⭐️ - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMihaela
Wonke umgangatho wokuqala wendlu elizweni elungisiweyo. Yonwabela uxolo nokuzola kwenye yezona ndawo zintle eBulgaria-Devetaki
Sinikezela ngendawo yokuhlala ukuya kutsho kubantu abayi-6. Amagumbi okulala ayi-2 negumbi lokuhlala elinesofa eyibhedi.
Sinikezela ngendawo yokuhlala ukuya kutsho kubantu abayi-6. Amagumbi okulala ayi-2 negumbi lokuhlala elinesofa eyibhedi. Le ndlu yeyona ndawo ifanelekileyo kwiinkampani ezinengxolo kunye nokuphumla. Ime embindini welali kodwa kwindawo enokuthula kakhulu. Akukho bamelwane. Akukho abanikazi bezindlu. Le ndlu inazo zonke izinto ezinokusetyenziswa zeholide. Kufuphi nelali ungonwabela iindawo ezininzi ezifana nemiqolomba, iingxangxasi namachibi. Kukho ivenkile kwilali evulekileyo yonke imihla. I-Devetaki yaziwa ngokuba ngowona mqolomba mkhulu kwiiBalkans.
Iingxangxasi zeKrushuna zikumgama wemizuzu eyi-20. Le ndawo ikulungele ukuqubha, ukuzingela nokuloba. I-Osam River ikude ngeekhilomitha eziyi-3. Kukho namachibi amaninzi. Amahlathi agcwele zizilwanyana zasendle ibe umoya ucoceke kakhulu
Umqolomba waseDevetashka umalunga neekhilomitha eziyi-2 (iikhilomitha eziyi-1.2) ukusuka kwidolophana yaseDevetaki. Indlela encinci ngasemlanjeni isuka kwilali isiya emqolombeni. Unokufikelela ngqo kwi-Road Kaen kwiindlela ezide eziyi-400 m (1,300 ft) kunye nebhulorho yesamente. Ngoku yinxalenye yepaki kawonke-wonke, equka ingxangxasi, umqolomba omde weekhilomitha eziyi-2 (1.2 mi) owenziwe kumqolomba osongwayo, ophawulwe sisinkholes nomlambo ongaphantsi komhlaba. Ininzi ngee-speleothems, ii-stalagmites, ii-stalactites, ii-rivulets ezininzi kunye nezindlu ezinkulu zemvelo.
Indawo yendalo ethi
"Devetashkata peshtera" yindawo emangalisayo yendalo, ekwiikhilomitha ezimalunga ne-20 ukusuka kwidolophu yaseLovech. Kukho indawo encinci yokupaka, ecaleni kwe-caravan apho kuthengiswa amatikiti (i-leva eyi-3 ngomntu omdala, i-leva eyi-2 ngomntwana ngamnye), i-200-300 m ukusuka emnyango ukuya emqolombeni. Emva koko luhambo olulula, olufutshane, oluwela umlambo i-Osam kwibhulorho eyakhiwe, njengomnikelo, wokufota imuvi "i-The Expendables 2" ngo-2011.
Iholo yokungena inkulu, mhlawumbi ingaphezulu kweemitha eziyi-50 ukuphakama, kunye neendawo eziyi-7 ezivulekileyo kwisilingi yayo. Umjelo, ovela kwenye yeegalari ezimbini zomqolomba, ugqitha kwiholo uze udibane nomlambo i-Osam.
Kukho iintlobo eziyi-15 zamalulwane kunye nezinye iintlobo eziliqela zeentaka ezikhuselweyo, izilwanyana ezincelisayo kunye nezilwanyana ezihlala emqolombeni kwaye iigalari ezimbini zivaliwe kwiindwendwe ukususela ekuqaleni kukaNovemba ukuya kutsho ekupheleni kukaMatshi ngexesha lokuzalisa amalulwane.
Kwinkulungwane ye-20 umqolomba wawusetyenziswa njengendawo yokugcina izinto ze-petrol ngumkhosi kodwa iitanki zasuswa ekuqaleni kwenkulungwane ye-21. Kukho iibhodi eziyi-3 zenkcazelo - ezona zibangela umdla, malunga namalulwane, kokubini ngesiBulgaria nesiNgesi. Ukongezelela, imephu yezinto zendalo ezikufutshane isemnyango.
Ukutyelela umqolomba yinto entle kwaye kunokudityaniswa nokubona ezinye iindawo ezinika umdla kule ndawo - iKrushuna Waterfall kunye nemiqolomba ejikeleze idolophana yaseKarpachevo.
Umbuki zindwendwe ngu- Mihaela